6 Macmacaanka Khudaarta-Lacag la'aanta ah ee Okra
Makhaayadaha & Cuntada fudud Cuntada American Cagaarka qudaarta Talooyinka Cuntada Gobolka Sahaminta Cuntada Koonfurta
6 Dukaanka fudud ee Okra
Sida loo Kobcin Karo Haddii aan "
Cunto fudud oo macaan leh ayaa loogu talagalay dadka u malaynaya inay jeclaanayaan okra, oo lagu daray, dabcan, kuwa horeyba u ogaa sida ay ugudhicirta cunta . Marka la kariyo ama la kariyey dareeraha, okra, runtii, "heli karaan". Si dhakhso ah u karinta iyo kuleylka qallalan, si kastaba ha ahaatee, ha ahaato dhadhanka, dhadhanka dabiiciga ah ee cusub ee dhalaalaya iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelato.
Ma hubo waxa la samaynayo kuwan cows ah? Iska hubi Dhamaan Dhammaan Okra si aad wax dheeraad ah uga ogaato.
Gooba Okra. Sawir © Molly Watson
Okra waa wax caadi ah sababo macquul ah. Cabbiraadda dufanka iftiin leh ee ku yaal godadka iyo dufka degdegga ah ee saliidda kulul waxay ka dhigaan cunsuriyadan la jarjaray, midab yar, iyo gebi ahaanba delicious. Dadka qaarkiis waa inay marka hore cunaan okra, waxay abuurayaan cunto fudud oo qani ku jirta oo u eg sida dufanka. Si aad u ilaaliso jilicsan ugu yaraan ugu yaraan, ka tag oo dhan qaybaha. Lacagta: Waxa kale oo ka yar shaqo. Cuntadani waxay u shaqeysaa labada hab.
Qaar ka mid ah saliidda, toonta la jarjaray ayaa bilaabaysa in ay soo jiidato dahabka, okra, iyo biyo yar yar si ay u yaraadaan. Taasi waa sida fudud ee la karinayo waa. Waa mid sahlan oo macruufka soo baxa oo cusub, si khafiif ah u jilicsan, oo aan dhicin. Toontada dahabka ah waxay ku dartay macnaha qosolka macaan ee keena macaan ee okra, sidoo kale. Waa hab aad u fiican oo ka baxaya qoyaanka qoyan iyo jilicsan iyada oo aan ka yarayn khudradda cagaaran ee khudradda.
Grilled Okra. Sawir © Molly Watson
Xirmooyinka qashinka ah ee ku yaalla okra qaboojiyaha ayaa muujinaya dhadhanka cagaaran, cawska sida cagaarka cagaaran. Waxaa intaa dheer, maxaa laga yaabaa in ay ka fududaan karto okra wax yar oo saliid ah oo iyaga ku tuuraya dabka ilaa 10 daqiiqo? Xaqiiqdii waa habka ugu sahlan ee loo kariyo okra, waana ku dhawaad ​​dad badan oo farxad leh sida kala duwan ee la shiilay. Haddii aadan haysan shidaal, hoos u dheji oo ka fiiri okra la dubay, taas oo abuureysa natiijo la mid ah tan la caleemo saaray oo aan ciriiri lahayn.
Okra leh Tamaandhada
Tamaandhada Casriga ah. Sawir © Molly Watson
Asiidhka yaanyada waxay jebinayaan jilicsanaanta jilicsan ee okra ee saxan, xitaa inkastoo okra lagu kariyey dareeraha. Waa nooc isku dhafan oo ah saxaraha wax lagu dhalaalay, lakabyo, iyo tufaax tufaaxa ah tan iyo isku darka dhirta ayaa sidoo kale ka caawiya yareynta diiqada sida badanaa la xidhiidha khudradda cagaaran. Oh, oo waxay dhadhaneysaa dhadhan fiican, sidoo kale.
Kalluumaysiga kuxiray Okra. Sawir © Molly Watson
Adoo dharbaaxaya okra dhererka iyo foornada kuleylka ah waxay soo saareysaa muuqaalkeeda ugu fiican: Nafaqada, dhadhanka dabiiciga ah leh oo leh meel u dhow macaan. Ku dar foorno cagaaran oo qoyan oo dheellitiran - waxay u dhigantaa dhowr daqiiqadood oo dheeraad ah si aad si taxadar leh u jeexdid tobnaad oo ah basasha cagaaran. Haddii aad jeceshahay shayada basbaaska leh, ku dar khudrad cagaaran oo cusub (sida serrano ama jalapeño) ama laba oo licking cajiinka ah oo la mariyo. Ku diyaari kuwan adoo adeegsanaya cunto karis ah oo daawanaya iyaga.
Qaar ka mid ah bahalka ayaa siinaya dhadhan weyn oo ah dhadhan weyn iyada oo la sii daayo dhadhanka nadiifka ah ee okra cusub oo dhalaalaya. Digsi kulul iyo qulqulo badan oo carqaladeeya waxay u oggolaaneysaa okra in uu xajiyo boodhkeeda oo uu kobciyo qashinka cagaarka leh isla waqti isku mid ah. Abuurka gudaha ah ee geedaha cagaaran iyo miraha garbaha ah ee isku xoqitaanka waraaqdan si aad u weyn.
Dabka dabka qabow
Madoobaadaha Saruudka ah ee la dubay (Maduros Asados)
Sida loo Isticmaalo Ribooyinka Beeraha iyo Feeraha
Oo la yiraah Lasagna Rolls Pesto
Cuntooyinka la kariyey ee digaaga ah
Intee ayey ku kacaysaa Kharashka Si aad u sameyso Cocktail?
Bacon Whiskey Shidaalkiisa ugu Fiican
Dufanka fudud Digaag (Hilib)
Qabsashada Cajiibka Qajaar leh Dhibleyda
Isku-daboolay Tofu Cunto leh Sulfin
Jarmal Fresh oo ah Casiirka Cusub ee Jarmalka
Dufan Chorizo ​​Sausage iyo Bakeeriyada Baradho
Saaxiibtinimada Sanadka Cusub: Waxyaalaha A Champagne fudud
Macmacaanka Honey Bun
Woqooyi Lambar leh Muso
Macmacaanka Lo'da Lo'da
Maxay yihiin Dhibaatooyinka Kooban?
Qalabaynta Strawberry Cagaaran Cagaarka Cagaaran
Moroccan Sweet Beet Salad Recipe